यसपालि महामन्त्री उठ्छु : सहमहामन्त्री डा महत – Nepal Japan
नेपाल जापान १९ मंसिर १६:२३
पार्टीभित्रको यो उहाँको नीति देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । उहाँ कसले के भने भनेर त्यसको पछि–पछि लागेर प्रतिवाद गर्नेतिर कहिल्यै लाग्नुभएन । देशको राजनीति कतातिर गइराखेको छ त्यसको सुक्ष्म यकिन गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो त्यसैले त उहाँले अहिले देशको कार्यकारीका रूपमा नेतृत्व गर्न सफल हुनुभएको छ । जस्तै भन्नु न देशमा नेपाली कांग्रेसको बढी मत भए पनि सांसद सङ्ख्याका आधारले गर्दा कम्युनिष्टहरू सरकार निर्माणमा बलिया थिए ।
तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि उनीहरू अब देशमा ५० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे । तर उनीहरूले यही एउटै कार्यकालको भार पनि थेग्न नसकेर राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बचाउन देउवा नै आउनुप¥यो । हामी त संसद्मा सानो थियौँ । तर पनि नेपाली जनताले त स्पष्टरूपमा कांग्रेसले नै देश हाँक्न सक्छ भन्ने खाँचो महसुस गरे नि । त्यसैले उहाँ नै सरकारको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुप¥यो । देशको संसद् बचाउन उहाँ नै अघि सर्नुप¥यो ।
उहाँमा पार्टीमा जस्तै देशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि मिलाएर लान सक्ने, उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुने गरेकाले नै तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुप¥यो भनेका हुन् । त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई जिताएर लैजान र पार्टीेभित्रका असन्तुष्टि र विग्रहलाई पराकाष्ठामा लैजान नदिनका लागि नेपाली कांग्रेसमा पनि अबका दिनमा उहाँजस्ता नेतृत्वको आवश्यक छ । उहाँले भनिरहनुभएको पनि छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टहरू मिल्दा कांग्रेसले हार ब्यहोर्नुप¥यो, अब सभापति भएर पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउँछु र अबका निर्वाचनमा जिताउँछु । यसका लागि पनि आउँदो अधिवेशनमा उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ ।
मेरो अनुभव र दक्षताअनुरुप पार्टीलाई आधुनिकतामा परिणत गर्न म प्रयत्नरत रहनेछु । जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो डा महतलाई किन मत दिने भनेर, यसको म जवाफ दिन चाहन्छु । जस्तो कि म प्रतिबन्धितकालदेखि नै नेपाली नेपाली कांग्रेसमा लागेर काम गरिरहेको छु । मैले विद्यार्थीकाल त के स्कुले जीवनदेखि नै मैले नेविसङ्घमा लागेर काम गरेको छु । मैले जेलनेल भोगेको छु । मैले आजदेखि होइन नि २०२९ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लिएर २०६२–६३ को आन्दोलनसम्म कांग्रेसको पक्षमा लागेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि केही समय बाहिर अध्ययनमा गएको समयबाहेक अरु सबै समय सक्रियरूपमा पार्टीमै लागेको छु । म सरकारमा रहँदा होस् या पार्टीमा पनि जे–जस्तो जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेँ त्यो पनि उच्च समर्पणका साथ पूरा गरेको छु । इमानका साथ मेरो सम्पूर्ण क्षमता र प्रयोग गरेर पार्टीले मलाई सरकारमा होस् या पार्टीमा दिएको काम इमान्दारिताका साथ पूरा गरेको छु ।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनसँगको बिआरआई सम्झौता मेरै नेतृत्वमा भएको हो । त्यसमा मेरै पहलमा नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई अनुकूल हुने गरेर धेरै संशोधन गरेर यो आयोजनामा हस्ताक्षर गरिएको हो । त्यस्तै भारतसँग पनि दुई देशकाबीचका जति पनि मुद्दाहरू छन्, ती सबै एक एक गरेर तथ्य, तथ्याङ्क र आधारसहित तर्कपूर्णरुपमा मैले प्रस्तुत गरेको छु ।
जस्तै गण्डक सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नेपलले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको अवस्था रहेछ । त्यो कुरा मैले उठाएँ र त्यसपछि दुई देशका विदेशमन्त्री तहमा एक समझदारीमा हस्ताक्षर भयो र त्यहाँ पूरा नभएका कुराहरू भारतले पूरा गर्ने भन्ने सहमति भयो । त्यस्तै गरेर अन्य सन्धि, सम्झौता या महाकालीदेखि सिँचाइ आयोजनासम्मका कुराहरूमा पनि मैले सम्झैता गराएँ जुन अहिले अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै वर्षायाममा सधैँ सीमा क्षेत्रमा बाढीका कारण डुबानमा पर्ने गर्दछ ।
त्यो विषयमा पनि मैले उठाएँ र पानीको जुन प्राकृतिक बहाव छ त्यसलाई स्वभाविकरूपमा जसरी जान्छ त्यसरी जान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ । त्यसछि द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने र मेचीदेखि महाकालीसम्मको संयुक्त निरीक्षणको आधारमा जहाँ–जहाँ बाधाहरू छन् तिनलई हटाउने भन्ने सहमति भयो । यसरी म पदमा रहँदा खुरुखुरु काम गरेँ, तर प्रचरमा कहिल्यै लागिनँ ।
नेपाली कांग्रेस संसारकै एक उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार भएको पार्टी हो । यसले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा धेरै काम गरेको छ । तर तपाईँले देख्नुभएको छ नि कम्युनिष्टहरूले आफूहरूले मात्र काम गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको होइन ? त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हाम्रा पार्टी सभापतिले नै पहिला स्थानीय र लगत्तै संसद्को निर्वाचन गराउनुभएको होइन ? यही संविधान र हामीले नै गरेको पछिल्लो निर्वाचनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन ? तर अहिले हेर्नोस् त कम्युनिष्टहरूले सबै आफैँले गरेजस्तो गरेर प्रचार गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा महिला, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजाति आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामीले गरेको होइन ? यी त पछिल्ला एकाध उदाहरण मात्र दिएँ यहाँलाई । यसबाहेक हामीले गरेका धेरै काम छन् यो देश र नेपाली जनताका पक्षमा ।
तर तिनको हामीले प्रचार गरेका छैनौँ, तर कम्युनिष्टहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले अब मैले भनेको छु कि पार्टीमा प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी देखियो । हामीले काम गरेकै छौँ, जनताले थाहा पाएकै छन् नि भन्यौँ हामीले । तर अहिले जमाना फेरियो, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मा¥यो । त्यसैले अब हामीले पनि आफूले गरेका कामको प्रचारै गर्ने त होइन तर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने अवस्था देखियो । म महामन्त्री भएपछि त्यो कामको प्रणाली बसाल्छु । यो प्रणालीलाई नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।
त्यसै गरी पार्टीको मूल्याङ्कन पद्दति पनि व्यापक परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यस्तो वैज्ञानिक ढङ्गले पार्टीको मूल्याङ्कन पद्दतिको स्थापना र विकास गर्नुपर्छ कि पार्टीको निकै सानो तहको स्थानीय कार्यकर्ताले पनि मलाई पार्टीको नेतृत्वले यथोचितरूपमा सम्बोधन गर्छ, आवश्यक मात्रामा मूल्याङ्कन गर्छ भन्नेबारेमा सुनिश्चित हुने गरी स्थापित गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो पार्टीमा देखिएको गुट–उपगुट कुनै वैचारिक आधारमा या नीतिगत मतभेद भएर होइन यो सबै व्यक्तिगत हो । त्यसैले पार्टीमा यथोचित सम्बोधन गर्ने र कामको मूल्याङ्कनको पद्दति स्थापित गर्न सकियो भने त्यसले यो गुटउपगुटको अवस्था हटाउने छ ।
मुलतः त्यो भ्रमण भारतको सत्तारुढ दलको आमन्त्रणमा नेपली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट भएको हो । मैले अघि नै भनेँ कि हिजोको अपरिपक्व र ढुलमुले नीतिले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘ड्यामेज’ गरेकै हो । हामीले वैदेशिक सहायता लिने काममा होस् या विदेश नीति सञ्चालन गर्दा पनि अत्यन्तै परिपक्वता आवश्यक छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रभागमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा देशलाई एक र अर्काेलाई अर्काे मापदण्ड अपनाउनु हँुदैन । यस्तो भयो भने देशका लागि घातक हुन्छ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा होस् या अरु बेला नै किन नहोस् आफ्नो देशको फाइदा हेरेर नै कुरा गर्ने गर्दछु । त्यसरी आफ्ना देशको पक्षमा कुरा राख्दा उहाँहरूले सहजरूपमा लिएको पाएँ ।
यसपालिको भारत भ्रमणमा पनि मैले यो पक्षलाई जोड दिएको हो । हाम्रा दुई देशबीचका कतिपय असमझदारीहरूलाई पनि मैले त्यहा राखेँ । ठोस, स्पष्ट र आधारसहित मैले हाम्रा मुद्दाहरू राखेँ । त्यहाँ रहँदा भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका अध्यक्ष, भारतीय विदेशमन्त्रीलगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेँ । यसबाट हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका साथै भारतीय सरकार र हाम्रो सरकारबीचका कतिपय मुद्दाहरूमा कुराकानी भयो र यसबाट द्धिपक्षीय समझदारीहरूमा वृद्धि भएको छ ।